YEYINTNGE(CANADA): Monday, June 18
Dr ကောင်းမြတ်ကျော်ဘာသာ ပြန်သည့်အမေစုနိုဘယ်လ်မိန့်ခွန်း
နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလိုမြို့တွင်နိုဘယ်လ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်း ဘာသာပြန် စဆုံး
ကမ္ဘာရဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆို ဒုက္ခသည်ဆိုတာရှိတာပဲ. ကျွန်မ ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်လ ဒုက္ခသည် စခန်းမှာတုန်းက တကယ့်ကိုပဲ ကိုယ့်လိုသူတွေရဲ့ဒုက္ခတွေ ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေကနေ လျော့ရင် တော့ ရန်ပုံငွေတွေ လျော့ မယ်။ နောက်တစ်ခုက ပထမတစ်ခုရဲ့ရလာဒ်ပါ စာနာထောက်ထားမှု လျော့တာ ကတော့ ဂရုစိုက်မှုတွေလျော့ကုန် တာပေါ့။ ဒါကိုကျွန်မတို့ တားနိုင်မလား။ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်က များလာပြီး မျက်လုံးကန်းတာမဟုတ်ရင် ဒုက္ခရောက်နေတာတွေကို မမြင်ခြင်ယောင်ပဲဆောင်လိုက်တာများလား။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတယ် အလှူရှင်တွေကို ကျွန်မ မေတ္တာရပ်ခံလိုတာက ခိုလှုံဖို့အတွက် မရေမရာ ရှာနေတဲ့ သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်လေးတွေကို ဖြည့်ပေးဖို့ပါ။
Dr ကောင်းမြတ်ကျော်ဘာသာ ပြန်သည်။။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/18/20120အကြံပြုခြင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် Dublin မြို့ ခရီးသတင်းရုပ်သံ
Watch Daw Aung San Suu Kyi in the round table discussion live on the rule of law
Zaw Win Tomorrow, Tuesday, 10:30 AM London Time
Tomorrow, Tuesday, 5:00 PM yangon Time
Watch Daw Aung San Suu Kyi in the round table discussion live on the rule of law, transitional justice, avoiding ethnic conflicts and demilitarization in Burma. If you are in UK it will be broadcast live on ITN, BBC, Sky, etc. If you are elsewhere there isalink below to watch the live webcast of the LSE roundtable.
If you are outside UK, are in UK but unable to be at the venue, or have unreliable broadband connection you can still watch this live on: BBC News, Sky News, ITN and CNN.
It's been confirmed that these networks will take the event live.
The Amnesty International Ambassador of Conscience Award at the Bord Gais Energy Theatre in Dublin, Ireland
Myanmar's pro-democracy leader Aung San Suu Kyi smiles as she walks on stage before being awarded the Amnesty International Ambassador of Conscience Award at the Bord Gais Energy Theatre in Dublin, Ireland June 18, 2012.
Myanmar democracy icon Aung San Suu Kyi (C) accepts from Sail Shetty, Secretary General of Amesty International (L) and Irish singer Bono (R) the Ambassador of Conscience Award at the Bord Gais Energy theatre in Dublin, Ireland on June 18, 2012. Aung San Suu Kyi landed in Ireland with U2 star Bono by her side foraflying visit on her European tour that was to see her pick upaprize honouring her unwavering commitment to human rights.
Myanmar's pro-democracy leader Aung San Suu Kyi makesaspeech after being awarded the Amnesty International Ambassador of Conscience Award at the Bord Gais Energy Theatre in Dublin, Ireland June 18, 2012.
အိုင်ယာလန် သမ္မတ Michael D. Higgins
Wikileaks မှ ပြောသည့် ရိုဟင်ဂျာ များနှင့် Al Qaeda ၊ မြန်မာ သောင်းကျန်းသူများ အဆက်အသွယ် ရှိခြင်း
မသီတာထွေးကို သတ်သူများ သေဒဏ်ချမှတ်
ရခိုင်ပြည်နယ် ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ကျောက်နီမော်ကျေးရွာအုပ်စု သပြေချောင်း ရွာသူ မသီတာထွေး လုယက်၊ မုဒိန်းပြုကျင့်၊ သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ တရားခံ နှစ်ဦးကို ကျောက်ဖြူခရိုင် တရားရုံးက ဒီကနေ့ သေဒဏ်မိန့် ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ အမှုစီရင်တာကိ်ု တရားရုံးမှာ ကိုယ်တိုင်တက်ရောက် နားထောင်ခဲ့တဲ့ ကျောက်ဖြူမြို့ ဒေသခံတဦးက ပြောပြပါတယ်။
"ဒီနေ့မနက် ၁၀ နာရီမှာ ကျောက်ဖြူခရိုင် တရားသူကြီး အမျုိးသမီးက စီရင်ချက်ကို ဖတ်ပါတယ်။ စစ်ဆေးချက်တွေ အားလုံးကို ဖတ်ပြတယ်။ အားလုံး သူ ၂ နာရီလောက်ကြာပါတယ်။ ပြီးတော့ စီရင်ချက် ချပါတယ်။ ၃ ယောက်မှာ တယောက်က သူ့ကိုယ်သူ သတ်သေသွားတဲ့အတွက်
တစုံတရာ အမိန့်ချစရာ မလိုတော့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ နောက် ၂ယောက်ကိုတော့ ကျောက်ဖြူခရိုင် တရားရုံးကနေ သေဒဏ်ချမှတ်လိုက် ပါတယ်။ အဲဒါကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် တရားရေးချုပ်၊ သူက အတည်ပြုမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီက အတည်မပြုခင် ၇ ရက်အတွင်းမှာ အယူခံတင်လို့ ရတယ်ဆိုတာကိုလည်း တရားခံတွေကို တရားသူကြီးကပဲ ဆက်တိုက်ပြောလိုက်ပါတယ်။ "
တရားသူကြီး ဒေါ်ဌေးဌေးကြည်က တရားခံတွေဖြစ်တဲ့ ရော်ဖိ နဲ့ လူယုဆိုသူတွေကို သေဒဏ်မိန့်စီရင်ချက် ချမှတ်လိုက်တာပါ။ အမိန့်ချပြီး တပတ်အတွင်း အယူခံဝင်နိုင်သေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီအမှုမှာ တရားခံအဖြစ် တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ လူ သုံးဦးထဲက တဦးဖြစ်တဲ့
ထက်ထက်ခေါ်ရော်ရှီးခေါ် ဖြိုးဇေယျာကျော်ဟာ ကျောက်ဖြူ
အကျဉ်းထောင်ထဲ ဇွန် ၉ ရက်ညနေက ကြိုးဆွဲချပြီး သူ့ကိုယ်သူ
သူတို့ သုံးဦးကို အဓမ္မပြုကျင့်မှု ပုဒ်မ ၃၇၆၊ လူသတ်မှု ပုဒ်မ ၃၀၂ နဲ့
လုယက်မှု ပုဒ်မ ၃၉၂ တို့နဲ့ စွဲချက်တင်ပြီး ဇွန် ၈ ရက်နေ့က အမှုစတင်
စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၂၆ နှစ်ရွယ် မသီတာထွေးဟာ ကျောက်နီမော်
စံပြရပ်ကွက် စက်ချုပ်သင်တန်းကနေ သပြေချောင်းရွာကို ဇွန်လ ၂၈ ရက်
ညနေပိုင်းကအပြန် ကျောက်ထရံရွာနားမှာ လူသုံးဦးက သူ့ကို
မုဒိန်းကျင့်၊ သတ်ဖြတ်၊ ရွှေထည်ပစ္စည်းလုယူမှု ကျူးလွန်ခဲ့တာပါ။
မနေ့ကတိုရန်တိုဘုန်းကြီးကျောင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်တွင်သေဆုံးသူအားလုံးအတွက်ဆုတောင်းပွဲနှင့် အတူအလှုငွေကောက်ခံပွဲကျင်းပခဲ့ပါသည်။အရှင်ကောဝိဒ(သာကီသွေး)ရဲ့ ရဲရဲတောက်တရားတိုလေး အချိန်ရရင်နာကြည့်ပါ။
စက်ရုံအလုပ်သမားများ၏ အနိမ့်ဆုံးယာယီလစာကို ကျပ် ၅၆၇၀၀ ဟု အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ သတ်မှတ်
Sunday, 17 June 2012 13:25
လုပ်ငန်းရှင်များအား အလုပ်သမား ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ယာယီ အခြေခံလစာ ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းနေစဉ်
အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနမှ စက်မှုဇုန်များရှိ စက်ရုံအလုပ်သမားများ ၏ အနိမ့်ဆုံးယာယီလစာအား ကျပ် ၅၆၇၀၀ သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း၊ အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လုပ်ငန်းရှင်များဘက်မှ အကောင်ထည်ဖော် ပေးရန် ၀န်ကြီးဌာနမှ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ အနိမ့်ဆုံးယာယီလစာ သတ်မှတ်ခြင်း အခမ်းအနားကို လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန် ကနောင်မင်းသား ကြီးခန်းမတွင် ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ကာ အလုပ်သမားရေးရာ ၀န်ကြီးဌာနမှ အနိမ့်ဆုံးယာယီလစာ အား(OT ကြေးမပါ) ကျပ် ၅၆၇၀၀ သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း၊ တရားဝင် အလုပ်သမားများမှာ ရှားပါးစရိတ်၊ Day ကြေး၊ ထုတ်လုပ်မှုစရိတ် အပိုကြေးစသည်တို့အား ထပ်မံခံစားခွင့်များ ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယာယီ အခြေခံလစာ သတ်မှတ်ရန်အတွက် ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့တွင် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ရာစက်မှု ဇုန်များရှိ စက်ရုံများအား ကဏ္ဍ အလိုက် ခွဲခြားကာ ယာယီ အခြေခံ လစာကို သတ်မှတ်ပေးသွားမည်ဟု ဆိုသော်လည်း ယခုအခါစက်မှုဇုန်များရှိ စက်ရုံများအား အနိမ့်ဆုံးယာယီအခြေခံလစာကို တစ်ပြေးညီသတ်မှတ်၍ စက်ရုံ လုပ်ငန်းရှင်များလည်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။
၀န်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက “ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အနည်းဆုံး အနိမ့်ဆုံးယာယီ အခြေခံလစာ ကို ဌာနပေါင်း ၃၈ ခုနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ အမြန်ဆုံး အကောင်ထည်ဖော်နိုင်ဖို့ အတွက် စက်ရုံလုပ်ငန်းရှင်တွေက အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကို ၀န်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတိုင်း ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ပေးသွားစေချင် ပါတယ်။ အတင်းအကျပ် တိုက်တွန်းတာမဟုတ် ဘဲ မေတ္တာရပ်ခံခြင်း ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
အနည်းဆုံး ယာယီလစာသတ်မှတ်ရန်အတွက် စက်ရုံလုပ်ငန်းရှင် များနှင့် ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် စက်ရုံ ၂၀ ကျော်ခန့် အဆင်ပြေမှုများ ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ယခင်က ဆန္ဒထုတ် ဖော်မှုများ မပြုလုပ်ခင်က စက်ရုံဝန်ထမ်း တစ်ဦး၏ အခြေခံလစာမှာ ကျပ် ၈၀၀၀ မှ ကျပ် ၃၀၀၀၀ ထိသာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့တွင်စတုတ္ထ အကြိမ်မြောက်ကျင်းပမည့် လွှတ်တော်တွင် အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ ဥပဒေကို တင်ပြသွားရန် ရေးဆွဲပြီးနေကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနှင့်အညီ အနိမ့်ဆုံး အခကြေးငွေကို ဆောင်ရွက်ပေးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့ တွင် CMP လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စိန်ခေါ်မှုစုပေါင်း ဆွေးနွေးပွဲတွင် အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဘင်္ဂလီလူမျိုးတစ်ဦး နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား အတုဖြင့် ပတ်စ်ပို့လာလျှောက်
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အတုဖြင့် ပတ်စ်ပို့လာလျှောက်သူ ဖမ်းမိ
ဘင်္ဂလီလူမျိုးတစ်ဦး နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား အတုဖြင့် ပတ်စ်ပို့လာလျှောက်ရာမှ ဗဟန်း မြို့နယ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရုံးတွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဇွန် ၁၂ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ယင်းနေ့ ၃ နာရီခွဲခန့်တွင် လ၀ကဦးစီးအရာရှိ ဦးဝင်းလှိုင်သည် ပတ်စ်ပို့ရုံးရှိ မှတ်ပုံတင်ရေးဌာန တွင် တာဝန်ဆောင်ရွက်နေစဉ် ကျော်ခင်(ခ) အဒူဟာရှင်(၃၀) နှစ် ဘင်္ဂလီလူမျိုး၊ ၁၂၃ လမ်း၊ သပြေကုန်းရပ် ကွက်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်နေသူသည် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြားအတု ကိုင်ဆောင်ပြီး နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လာ ရောက်ပြုလုပ်ရာမှ ယခုကဲ့သို့ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“အခုဒီကိစ္စကို ဗဟန်းရဲစခန်းက တာဝန်ယူစစ်ဆေးနေတယ်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို လိမ်လည် လျှောက်ထားတာပဲ။ မှတ်ပုံတင်အတုကို ဘယ်ကလုပ်တာလဲ။ ဘယ်သူပြုလုပ်ပေးတာလဲစတဲ့အချက်တွေ စနစ် တကျစစ်ဆေးပြီး စုံစမ်းဖော်ထုတ်သွားမယ်။ ထိထိရောက်ရောက် ဥပဒေအရ အရေးယူသွားမှာပါ” ဟု မြန်မာနိုင် ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန များ၌ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို မမှန်မကန်မပြုလုပ်ရေး၊ တိုင်းတစ်ပါးသားများကို နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြုလုပ်မပေး ရေး၊ အချက်အလက်မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်စေရေး၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူကင်းရှင်းစေရေးစသည့် အချက်များကို သက်ဆိုင်ရာရုံးများတွင် အသီးသီးဖော်ပြထားကြောင်း သိရသည်။
“ခုလိုအချိန်မှာ ဘင်္ဂလီလူမျိုးတစ်ဦးနိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြားအတုကိုင် ပတ်စ်ပို့လျှောက် တာဟာ စိတ်ဝင်စားစရာကိစ္စပဲ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှမှတ်ချကမပေးလိုဘူး” ဟု လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည် သူ့အင်အားဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါအမှုကို ဗဟန်းရဲစခန်းမှ (ပ) ၂၈၉/၁၂၊ ပုဒ်မ-၄၂၀/၄၆၈ ဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
Source: The article first appeared on Flower News Journal(ပန်းသတင်းဂျာနယ်) - အတွဲ ၈၊ အမှတ် ၂၃
ဓါတ်ပုံ - Cathal McNaughton/Reuters
ဒီနေ့ Dublin လေဆိပ်မှာ အမေ့ကို လာကြိုတဲ့ ကိုဇာဂနာ
ခဲအိုကြီး ဟာ အမေ့အတွက်တော့ အစ်ကိုတစ်ယောက် အစားရသလိုပါပဲ ...
ဓါတ်ပုံ - Thit Sar
Norway's FM meets Aung San Suu Kyi at the Foreign Ministry forameeting in Oslo,
နော်ဝေနိုင်ငံ ဒုတိယမြို့တော် Bergen ရောက် ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည်
ဓါတ်ပုံ - Helgheim/NRK
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးဆုပေးအပ်ပွဲနှင့်U2အဖွဲ့အပါအဝင်ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော်များ၊သရုပ်ဆောင်များမှ ဂုဏ်ပြုတင်ဆက်မည့် Electric Burmaအမည်ရှိဂီတပွဲတော်သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ ဂီတပွဲတော်အပြီး ဒပ်ဗလင်ရှိ ဂုဏ်ပြုရင်ပြင်တွင် အိုင်ယာလန်ပြည်သူများကို အမှတ်တရစကားပြောကြားမည်ဖြစ်သည်။ ယနေ့မနက်နော်ဝေနိုင်ငံတွင် နှစ်စဉ်ကျင်းပသော Oslo Forumတွင်အိုင်းရစ်အဆိုတော်ဘိုနိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားယနေ့ဒပ်ဗလင်မြို့သို့သွားရောက်ရန်အတွက်သူ၏ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်ကိုပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း နော်ဝေနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Credit to Aung Pan.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီကနေ့ ညနေ အိုင်ယာလန် နိုင်ငံ ဒပ်ဘလင်မြို့ကို ရောက်ရှိလာပါတယ်။ နော်ဝေ နိုင်ငံကနေ အိုင်ယာလန်ကို လာရောက်ဖို့ အတွက် ကမ္ဘာကျော် ယူတူး ရော့ခ်တေးဂီတအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဘိုနိုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သူ့ကိုယ်ပိုင် ဂျက်လေယဉ်နဲ့ လာရောက်ကြိုဆိုခဲ့တာပါ။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီကနေ့ နော်ဝေနိုင်ငံမှာ အော်စလိုမြို့နားမှာ ကျင်းပတဲ့ "အော်စလို ငြိမ်းချမ်းရေး ညှိနှိုင်းမှု အစည်းအဝေး" ကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ အစည်းအဝေးကို နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင် ၁၀၀ နီးပါးလောက် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာကျော် ရော့ခ်အဆိုတော် U2 အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဘိုနိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့သလို ဆွီဒင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Carl Bildt အပြင် မြန်မာ အစိုးရစက်မှုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းတို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့တယ် လို့ သိရပါတယ်။
အော်စလို ငြိမ်းချမ်းရေး ညှိနှိုင်းမှု အစည်းအဝေးဟာ နိုင်ငံတွေရဲ့ အပြောင်းအလဲကာလအတွင်းမှာ အရေးကြီးတဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာခြင်း ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆွေးနွေးတာလို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီ ဆွေးနွေးပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အာရပ်ကမ္ဘာက နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲတွေကို အဓိကထား ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒပ်ဗလင်မြို့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ "Electric Burma" စင်တင်တေးဂီတနဲ့ ဖျော်ဖြေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပွဲကို နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ကြီး အေအိုင်က စီစဉ်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီး ပွဲအပြီးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၆၇ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ဆုတောင်းပွဲကို ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။
ယူတူးပွဲကို ပရိသတ် ငါးထောင်လောက် တက်ရောက်ဖို့ရှိပြီး ကမ္ဘာကျော် အနုပညာရှင်တွေလည်း တက်ရောက်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၀ါရင့်စာရေးဆရာကြီး (လူထု ဦးစိန်ဝင်း) ယနေ့ ည (၁၁) နာရီ (၁၇/၆/၂၀၁၂) တွင် SSC ဆေးရုံ၌ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်
ဝါရင့်သတင်းစာဆရာကြီး လူထု ဦးစိန်ဝင်းကွယ်လွန်
သတင်းစာလောကအတွက် အလွန်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတခု ဖြစ်တယ်လို့ ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ် အတိုင်ပင်ခံအယ်ဒီတာသတင်းစာဆရာ မောင်ဝံသက ပြောပါတယ်။
"အင်မတန်မှ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ အင်မတန်မှ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရ ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ နှမြောတသတယ်လို့လည်း ပြောရမှာပေါ့ဗျာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူ့အသက်အရွယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် ကျန်းမာရေး သာကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် အများကြီးကို တိုင်းပြည်အတွက် စာကောင်းပေကောင်းရေးနိုင်သေးတယ်။ နောက်သူအင်မတန် ထက်မြက်တယ်ဗျာ။ အင်မတန်ရဲရင့်တဲ့ ကလောင်တချောင်းဖြစ်တယ်။ ကျန်းမားရေးချို့တဲ့တာ နှစ်တော်တော်ကြာကြာကို ချို့တဲ့နေတဲ့ကြားထဲ ကနေပြီးတော့ ဒီအောက်ဆီဂျင်ပိုက်တန်းလန်းနဲ့ စာတွေဆက်ရေးနေတယ်။ ရေးတဲ့စာမှန်သမျှကလည်း စေတနာလည်းပါတယ်ဗျာ။ အင်မတန် ရဲရင့်ပြောင်မြောက်တယ်။ တိုင်းပြည်ကို ပြုပြင်တဲ့ကလောင်ပေါ့။ နောက် ဝေဖန်ထောက်ပြစရာရှိတဲ့ နေရာမှာလည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ မငဲ့ညှာပဲနဲ့ ဝေဖန်ထောက်ပြတယ်။ အဲဒီလို ကလောင်တချောင်း ဆုံးရှုံးရတာကို ကျွန်တော်ကတော့ အင်မတန် နမြောတသပါတယ်"
လူထု ဦးစိန်ဝင်းဟာ ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့မှာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ဆိုးရွားလာတာကြောင့် အထူးကုဆေးရုံမှာ တက်ရောက်ကုသခံယူရင်း ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပါ။
လီကွန်ယူ နဲ့ ဂိုချုပ်တောင် J ၀င်နေကြတယ်
The Straits Times ..... via May Ni
Dr ကောင်းမြတ်ကျော်ဘာသာ ပြန်သည့်အမေစုနိုဘယ်လ်မိန့်ခ...
ကောင်းကင်ယံမှ အဖြူရောင် မီးလုံး သဏ္ဌာန်ကြောင့် မန္တေ...
Watch Daw Aung San Suu Kyi in the round table disc...
The Amnesty International Ambassador of Conscience...
စက်ရုံအလုပ်သမားများ၏ အနိမ့်ဆုံးယာယီလစာကို ကျပ် ၅၆၇...
ဘင်္ဂလီလူမျိုးတစ်ဦး နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား အတုဖြ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒပ်ဗလင်သွားရန် ဘိုနိုက ဂျက်လေယာဥ...
၀ါရင့်စာရေးဆရာကြီး (လူထု ဦးစိန်ဝင်း) ယနေ့ ည (၁၁) ...